Cali Khaliif oo eedeeyey wasiiro katirsan Somaliland – Radio Daljir
Agoosto 12, 2017 6:39 g 0
Hogaamiyaha Khaatumo ee wadahadalka kula jira Somaliland ayaa sheegay siyaasiin katirsan Somaliland oo kasoo jeeda deegaanada SSC inay kasoo horjeedaan wadahalada Somaliland iyo Khaatumo.
Dr Cali Khaliif ayaa warbaahinta ugu sheegay Hargaysa siyaasiyiintan inuu kujiro damac gaar ah oo ay ku doonayaan inay ku matalaan shacabka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ay kaga dhaadhicinayaan Somaliland inay iyagu yihiin dad miisaan ku leh goboladaasi.
“Si khaas ayaan ula kulanay kuwa golaha xukuumadda kujira, laakiin waxaanu kala kulanay run ahaantii inayan diyaar u ahayn, mushkilada hadda taagan oo Somaliland gudaheeda ka taagan iyaga ayaa u sabab ah, haddii wadahaladan sida ay tahay looga garbixina iyaga ayaa ka masuul ah” ayuu yiri Cali Khaliif Galaydh oo intaasi ku daray inay u muuqan siyaasiyiinta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn inay yihiin xubno katarjumaya golle xukuumadeed.
Waxaana uu sheegay sababaha ay u diidanyihiin inay ugu wayntahay dano gaar ah oo ay leeyihiin, isagoona xusay inay waxba usoo kordhin karin Somaliland.
Maamulka Cali Khaliif Galaydh ayaa horay wadahadalo ula furay Somaliland oo sheegtay inay go’day Soomaaliya inteeda kale, waxaana heshiiska uu kula jiro Somaliland qaadacay raggii ay wadashaqeynayeen ee kujiray maamulka Khaatumo.